Maxkamada Sare ee Kenya oo ogolaatay in muwaadiniinta Kenyan-ka u safri karaan Somaliya – STAR FM SOMALIA
Maxkamada Sare ee Kenya oo ogolaatay in muwaadiniinta Kenyan-ka u safri karaan Somaliya
Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa go’aan ka gaartay inaysan dambi aheyn in dadka Kenyan-ka ah ay u safraan Somaliya.
Wasaaradaha Amniga iyo gudaha Kenya ayaa horay u mamnuucay in dadka Kenyanka ah ee u safraya Somaliya.
Sidoo kale Baarlamaanka dalka Kenya ayaa sanadkii 2012-kii waxaa ay meel mariyeen qaraar dadka Kenyaan-ka ah ka mamnuucaya waddanka Somaliya inay u safraan,waxaana qofkii u safra Somaliya loo aqoonsanaayay in uu ku biirayo Al-Shabaab haddii la qabtana uu xukunkiisa yahay 10 Sano oo xabsi ah.
Xeerkaas oo magaciisu ahaa la dagaallanka argagixisada ayaa waxaa ay dowladda u adeegsan jirtay Dadka Kenyaanka ah ee u safraya Somaliya.
Garsooraha Maxkamadda sare ee Kenya George Dulu,ayaa sheegay in go’aanka Maxkamadda uu yahay mid sharci ah muwaaddiniinta Kenyan-ka ahna ay u shaqo tagi karaan Somaliya iyaga oo aan marin laamaha socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dalka Kenya.
Dadka Kenyaan-ka ah ee ka shaqeysta Somaliya ayaa lagu qiyaasaa 20,000 oo Kenyaan ah,waxaana ay inta badan ka shaqeeyan Hoteellada,Shirkadaha Tignolojiyadda,Jaamacadaha iyo meelo kale.
Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada sida gaarka ah ay ula beegsanayaan Ciidamada Kenya ee Somaliya ku sugan, kuwaasi oo qaati ka taagan weerarada Shabaab.
Maxkamada Caalamiga ayaa maalinta Khamiista ah ee 2da February go’aan ka gaareysa dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Xildhibaan maanta lagu dooranaayo Magaalada Baydhabo